Siciid Deni oo safar laba toddobaad ah ku qaatay Imaaraadka Carabta iyo xogta laga helay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Siciid Deni oo safar laba toddobaad ah ku qaatay Imaaraadka Carabta iyo xogta laga helay
Deni ayaa noqday mas’uulka ugu weyn Soomaalida ee sida joogtada ha u taga Imaaraadka Carabta, kuna qaata waqtiga ugu badan
Madaxweynaha maamul Goboleedka Puntland ayaa soo gabgabeeyay safar muddo laba toddobaad qaatay oo uu ku tegay dalka Imaaradaka Carabta.
Siciid Deni ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland, iyadoo ay halkaasi kusoo dhoweeyeen Madaxweyne Ku-xigeenka Dowadda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, Guddoomiye Ku-xigeenka koowaad ee Golaha Wakiillada Dowladda Puntland, Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan iyo xubno kale.
Safarrada Madaxweynaha Puntalnd ee Imaaraadka ayaa u badna qarsoodi, Ma jirin wax war ah oo Madaxweyne Deni ka bixiyey socdaalkiisii ugu danbeeyay e dalka Imaaradka Carabta oo uu si joogto ah u tago, waxayna wararku sgeegeen inuu la xiriiray arrimaha doorashada Soomaaliya.
Siciid Deni ayaa ah hoggamiyaha Soomaalida ee xilligan ugu dhow dalka Imaaraadka Carabta, isagoo intii uu xilka qabtay ku dhowaad 20 jeer booqday Imaaraadka, waxayna safarradiisu qaataan in ka badan toddobaad.
Madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo aanu weli shaacin, waxaa la tuhunsa tyahay inuu tageero ka helayo Imaaraadka.
Previous articleSawirkii ugu horeeyay ee Cali Xarbi iyo Cidda ka danbeysay inuu xagjir noqdo oo la ogaaday (Akhriso)
Next articleMadaxweynaha K/Galbeed oo xilkii ka qaaday Guddoomiyaha Gobolka Sh/Hoose iyo ku xigeenkii..